फोरम नेपालबाट मेयरका उम्मेदवार, जनकपुर उपमहानगरपालिका
० जनकपुरको मेयर पदमा तपाईंले उम्मेदवारी किन दिनुभयो ?
— यो देशमा १५ प्रतिशत खसबादी प्रबृतिका मानिस ८५ प्रतिशत उत्पीडितका अधिकार खोसेर राखेका छन् । उत्पीडिनमा परेका आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमलगायतको आवाज बुलन्द गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी परेको हो । यो देशमा बारम्बार संविधान बनेको छ । ६ वटा संविधान निष्कृय भइसक्यो । यो सातौं संविधान हो । तर, खस प्रबृतिका मानिसले यो संविधानमा पनि उत्पीडितका अधिकार, कुण्ठित गरेको छ । उत्पीडनमा परेका जनतालाई वाइपास गरी संविधान जारी गरिएको छ । जुनबेला संविधान जारी भइरहेको थियो, त्यस बेला मधेशकाजनता शहीद भइरहेका थिए । टाउको र छातीमा गोली प्रहार गर्ने काम भइरहेको थियो । तर, दुर्भाग्य केही मधेशी दलालहरूले खसवादीको यो षड्यन्त्रमा साथ दिन तालि बजाएर संविधानको स्वागत गरिरहेका थिए । धेरै शहीदहरूको सपना पूरा गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी परेको छ ।
० जनकपुर उपमहानगरपालिकाका लागि तपाईंको प्रतिबद्धता के छ ?
— बुटवल, काठमाडौं, पोखरा, इटहरीसहितका स्थानमा कति धेरै विकास भएको छ । तर, दक्षिण भेगका क्षेत्र राजविराज, सिरहा, जनकपुर, जलेश्वरलगायत नर्कीय अवस्थामा छन् । यी क्षेत्रलाई यस अवस्थामा खसबादी मानसिकताका मानिसले पु¥याएका छन् । उनीहरूले मधेशका जनता र मधेशका शहरहरूलाई बर्बाद पारेका छन् । खसबादीलाई मात्र शासनमा पु¥याउने सोच उनीहरूमा रहेको छ । उत्पीडनमा परेका ८५ प्रतिशत जनतालाई अपहेलित गर्ने सोच उनीहरूमा हाबी छ । अब जनकपुरको कुरा गर्ने हो भने जनकपुर धार्मिक पर्यटकीय नगरी हो । हिन्दूहरूका लागि जनकपुर प्रसिद्ध ठाउँ हो । तर, दुर्भाग्य अहिलेसम्म पनि जनकपुरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छैन । राजा जनककालमा जनकपुर ग्रिन र क्लिन शहर थियो । तर, अहिले जनकपुरको स्वरूप नर्कीय बनेको छ । नेपालको एक मात्र रेल सेवा जनकपुरमा छ । जापान र जनकपुरको रेल सेवा एकै समयमा सुरू भएको थियो । आज जापान कहाँ पुगिसक्यो, तर नेपाल यस मामिलामा धेरै पछाडि नै छ । पुरानो रेलका इन्जिनलाई संग्रहालयमा राख्ने र आधुनिक रेल सेवा विस्तार गराउने, जनकपुरका मठ–मन्दिरलाई व्यवस्थित पार्ने मेरो प्रतिबद्धता छ । जनपकुरको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । म माकुरोको जालो जस्तो रहेको भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्ने छु । जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विकानस्थल निर्माणमा सक्रिय रहनेछु । जनकपुरलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्रिय रहनेछु ।
० नेताहरूले मत लिने र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । भनेपछि नेताहरूमाथि विश्वासको आधार के ?
— हुने विरूवाको चिल्लो पात भन्ने गरिन्छ । मेरो इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ । म २०४६ सालमा कक्षा १० मा पढ्दाखेरी आन्दोलनमा घाइते भएर जेल परेको थिएँ । त्यसबेला देखिनै यो देशमा जति पनि परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरू भएका सबैमा मेरो भूमिका थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरी पदच्युत गर्दा भएको विरोधका क्रममा म माथि आक्रमण भयो । मेरो खुट्टा नै भाँचियो । म सक्रिय नभएको कुनै पनि आन्दोलन छैन । म आन्दोलनकारीका रूपमा परिचित छु । मैले अहिलेसम्म कुनै किसिमको अनियमितता गरेको छैन । म निष्ठाको राजनीति गर्दै आएको छु । म सत्यका लागि लड्न चाहन्छु । उत्पीडिनमा परेका समुदायको हकहितका लागि लड्दै आएको छु । जनकपुरको अस्पतालको अवस्था हेर्नुस्, शिक्षाको अवस्था हेर्नुस्, सबै दयनीय अवस्थामा परेका छन् । विपन्न वर्गका मानिस पनि उपचारका लागि निजी अस्पतालमा जान बाध्य भइरहेका छन् । स्थानीय निकायमा रहने हरेक सरकारी निकायलाई व्यवस्थित पार्ने मेरो लक्ष्य छ । यसका साथै भ्रष्टाचार निमूल पार्न प्रतिबद्ध छु ।
० सबै दलका नेताले जनकपुरलाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर, अझै महानगरपालिका घोषणा गरिएको छैन । यो सन्दर्भमा तपाईंको प्रतिबद्धता के छ ?
— बार्ड महानगरपालिका लेख्ने हो कि साच्चैको महानगरपालिका बनाउने हो यस विषयमा विचार गर्नु आवश्यक छ । महानगरपालिका बनाउने किसिमको काम हुनुप¥यो । हाम्रो पार्टीको जनकपुरमा प्रदेश कार्यालय खुलेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको प्रदेश कार्यालय जनकपुरमा खोलिएको छैन । यस मामिलामा फोरम नेपाल एक कदम अगाडि छ । जनकपुरलाई महानगरपालिका बनाउन के कति संघर्ष गर्नुपर्छ, त्यसको लागि म तयार छु । विगतमा स्थगित गरिएको भारतीय प्रधानमन्त्री मरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण गराउने मेरो सोच छ । भारत र चीनसँग सहयोग लिएर जनकपुरको विकासका लागि अग्रसरता देखाउने छु । जनकपुरको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पहल गर्नेछु । नियोजित रूपमा जेलमा राखिएको संजय साहलाई रिहा गराउन पनि संघर्ष गर्नेछु ।
० जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गराउने विषयमा तपाईंको प्रतिबद्धता के छ ?
— श्रदेय नेता रामनारायण मिश्रले आफ्नो कार्यकालमा जनकपुरमा चुरोट कारखाना गर्नुभएको थियो । तर दुर्भाग्य उहाँकै पार्टीका अन्य नेताहरूले कमिशनको खेलमा लागेर जनकपुर चुरोट कारखानालाई बन्द गराएर पाँच हजार कर्मचारी र कामदारलाई सडकमा ल्याउने काम गरे । जनकपुरमा धरोहरका रूपमा रहेको चुरोट कारखानालाई ध्वस्त पार्ने काम गरियो । चुरोट कारखाना मात्रै होइन यो देशमा भएका करिब करिब सबै सरकारी उद्योग ध्वस्त भइसकेका छन् । कांग्रेसका कारण उद्योगहरू ध्वस्त भएका छन् । कांग्रेसका नेताहरू अरबपति भए । जनकपुर चुरोट कारखानालाई बर्बाद पारेर कांग्रेसका नेताहरूले सूर्य टोबाको कम्पनीलाई मलजल गरेका थिए । जति पनि निजी उद्योगहरू खुलेका छन्, त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा कांग्रेसका नेताहरूको लगानी छ ।
० जनकपुर चरोट कारखाना पुनः सुचारू गर्न प्रयत्न गर्नुहुन्छ ?
— हो । जनकपुर चुरोट कारखाना सुचारू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।
० नयाँ संचरनामा मुलुक गइसकेको छ । अब यो संचरनामा भ्रष्टाचार नहुने कुराको ग्यारेन्टी के छ ?
— त्यही पार्टीका नेताहरू आयो भने १० गुणा भ्रष्टाचार बढ्छ । त्यसैले परिवर्तनकारी शक्तिलाई जनताले विश्वास गर्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी विकासका लागि हितकर छैन ।
० जनकपुरमा अत्यधिक मात्रामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन के गर्नुहुन्छ ?
— राम अयोध्यामा र सिता जनकपुरमा रहेका छन् । अयोध्याको विकास भयो । तर, जनकपुरको विकास हुन सकेन । त्यसैले यी दुवै ठाउँको समान रूपमा विकास हुन सकेन हामी हिन्दूहरूका लागि लजास्पद कुरा हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपना पनि अधुरो रहन्छ । त्यसैले भारतीय राजदूतावासको मार्फत् समन्वय गरी जनकपुरलाई धार्मिक नगरीका रूपमा चिनाउन प्रयास गर्नेछु । त्यस्तै, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न लगाउन पनि प्रयास गर्नेछु । जनकपुरलाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्न भारतको सहयोग आवश्यक छ ।